« Madagascar Tour 2017 » : hanao seho voalohany eto ny tarika Alalà | NewsMada
« Madagascar Tour 2017 » : hanao seho voalohany eto ny tarika Alalà
Par Taratra sur 30/11/2017
Fantatra omaly, tetsy amin’ny Carlton Anosy fa manatanteraka fitetezam-paritra ny tarika Alalà. Araka ny fandaharam-potoan-dry zareo, ny 2 desambra izao ka hatramin’ny 16 desambra, hanolotra seho ao anatin’ny « Madagascar Tour 2017 » izy ireo. Fampisehoana an-tsehatra voalohany tanterahin’ity tarika ity eto Madagasikara.
Tafiditra ao anatin’izany ny 2 desambra ny any Toliara, ao amin’ny Vakok’Arts. Hiazo an’i Fianarantsoa indray izy telo mianadahy ahitana an’i Alice sy i Goul ary i Laurie ny 7 desambra, ka hanatontosa seho ao amin’ny Alliance française. Vao vita izany, ny 8 desambra ao amin’ny La Palette Antsirabe indray. Ny 13 desambra, hanatanteraka seho ao amin’ny AFT Andavamamba ny tarika Alalà. Ny 14 desambra, ao amin’ny Kudeta Anosy.
Ho an’i Alice sy i Laurie, « fihaonana voalohany ataonay amin’ny mponin’ity Nosy ity izao « Madagascar Tour 2017 izao ». Ho an’i Goul indray : « avy eto anivon-tany aho, saingy ity no hanitsahan’ny tongotro voalohany iny faritra atsimon’i Madagasikara iny ».
Marihina fa anisan’ny tarika manana ny lazany amin’ny alalan’ny tambajotra sy haino aman-jery maro isan-karazany ny tarika Alalà.